अब मूल्य phraseologism "एक ब्रश संग तपाईं राम्रो दिन" रहस्य मा shrouded छ। र एक व्यक्ति चाहनुभएको छ के थाहा छैन भने, त्यसपछि त्यो के भन्दै छ बुझेनन्। तपाईं थाह छ, लुकेको केही प्रकट हुनेछ भनी छैन, त्यसैले कुहिरो dispel प्रयास गर्नेछ छ। किन यो यसको आधुनिक रूप फेला phraseological को मूल को इतिहास बारे र भन्छु, र व्याख्या।
तपाईँको भनाइको अर्थ?
यो विश्वास वा साथै, तर वाक्पद्घति ओडेसा आए। हो, यो शहर मिथक र दन्त्यकथा, भाषा को विशेष गरी दन्त्यकथा भरिएको छ: बोलीको पालैपालो धेरै त्यहाँबाट गए। तथापि, जानकारी को स्रोत, नियम, धेरै विश्वसनीय छैन - आफूलाई ओडेसा।
यसअघि टेलिभिजन विज्ञापन को आगमन अघि, मान्छे मुख्य रूप रेडियो मार्फत जानकारी प्राप्त "शब्द।" हात र मुख बाट मुख गर्न हात बाट "हस्तान्तरण" सबै भन्दा राम्रो विशेषज्ञहरु। हामी कुनै अपवाद र hairdressers थिए। र नयाँ ग्राहकहरु आकर्षित गर्न मा, हजामको गाली गर्न, आफ्नै हजामको पसल को प्रवेश उभिरहेको थियो: "- नौ, ककडी संग - हाम्रो अभिवादन तपाईं, एक ब्रश संग, एक औंला पन्ध्र" यहाँ सन्देश रहन्छ जो देखि कथन को मूल पूर्ण संस्करण हो। हामी भागहरु को व्याख्या गर्न अगाडि बढ्नुहोस्।
ब्रश र औंला
तपाईंलाई थाहा रूप मा, नाई आफ्नो मात्र होइन कटौती अघि, तर पनि shaved। तिनीहरूले यो खतरनाक ब्लेड गरे र विशेष गरी ग्राहकहरु संग समारोह मा खडा छैन: तिनीहरूले, उदाहरणका लागि, आफ्नो औंला आफ्नो मुखमा क्रममा राख्नु सक्छ राम्रो आफ्नो जब प्रदर्शन गर्न। उहाँले एक व्यक्तिको मुखको हातमा चढेका भन्ने तथ्यलाई विकृत गर्दैन त, ती दिनमा हजामको एक दन्त चिकित्सक रूपमा सेवा गरेको कारण wince गर्न हतार छैन। यो थियो क्रममा। निस्सन्देह, जेल शेविंग, पनि, अझै, त्यसैले साधारण साबुन shaved, र, गाला मा राख्नु एक ब्रश वा swab प्रयोग गर्न आविष्कार गरेको छैन।
स्पष्ट गरे "एक ब्रश संग तपाईं राम्रो दिन" phraseologism अर्थ, तर यो इतिहासको अन्त छैन। मा सार्दै।
किन "ककडी" अधिक महंगा?
यहाँ पनि, त्यहाँ कुनै रहस्य छ। एक मानिस राम्ररी दाढी गर्न, यो आफ्नो गालामा टाँसिएको गर्न आवश्यक थियो। यो तपाईंको औंला गर्न सकिन्छ, र यो एक ककडी बनाउन सम्भव थियो। को नाउ सबै ग्राहकहरु को लागि एक तरकारी प्रयोग गर्नेछ किनभने ककडी, अधिक महंगा छ। यो पनि ती पटक को standpoint देखि, unhygienic छ। र त ग्राहक थप र ककडी दिन्छिन्।
के इतिहास हेर्नुहोस् को बिन्दुबाट धेरै रोचक छ बोलीको आंकडा, "एक ब्रश संग तपाईं राम्रो दिन", भन्न (मूल यो पुष्टि गर्छ)।
को उपस्थिति phraseologism अर्को संस्करण (कम मनोरंजक)
अब हामी hairdressers कुरा छैन, तर दूत बारेमा। प्राचीन समयमा, दूत फर एक tassel एक टोपी लगाउन आवश्यक थियो। तिनीहरूले गन्तव्य मा आइपुग्दा, त्यसपछि पाहुना अघि आफ्नो टोपी हटाइएको र यसरी गहिरो श्रद्धाको व्यक्त, उहाँलाई कम निहुरियो।
देख्न सकिन्छ रूपमा, दुवै संस्करण एक ब्रश संग केहि कार्यहरू गर्न, आदर व्यक्ति मा जिद्दी। यो hairdresser बेहद ग्राहकहरु मूल्यवान छ स्पष्ट छ, तर पनि उहाँले राम्रो वा नराम्रो समाचार ल्याए जसलाई गर्न दूत अभिवादन। कुनै पनि घटना मा, कारोबार "एक ब्रश संग तपाईं राम्रो दिन" (phraseologism इतिहासको समपार्श्व मार्फत राम्रो बुझेका अर्थ) तुच्छ छैन।
प्राप्त आधुनिक नजर अभिव्यक्ति रूपमा?
यो एक कठिन प्रश्न छ, तर एउटा कुरा निश्चित छ: बोली भाषा अभिव्यक्ति माध्यम बचत गर्न प्रतिबद्ध छ। म यति भन्न सक्छ भने, लिखित भाषा खेल्न प्रेम गर्नुहुन्छ र मौखिक प्रयासहरू सबैभन्दा साँघुरो ठाउँ नै महसुस गर्न। तसर्थ, उखानमा लामो बाट समय खण्डमा संग सबै भन्दा गहन भाग बाँकी छन्। उदाहरणका लागि, सबैले भनाइ थाह "भोक मेरो चाची छैन।" तर केही मानिसहरू यो वचनहरू अंश मात्र हो भनेर थाहा र पूर्ण यो जस्तै सुनिन्छ: ", Patty छैन podneset भोक मेरो चाची छ।" सिद्धान्त, यो कि अर्थ परिवर्तन छैन स्पष्ट छ।
तर कहिले काँही हितोपदेश यस्तो विवरण, यो एक primordial सामग्री स्थापना गर्न सम्भव अब जो बिना, हामी के र कस्तो अवसर गुमाउन। यो समूह र मूल्य "एक ब्रश संग तपाईं राम्रो दिन।" Phraseologism बुझाउँछ दिगो वाक्यांश शब्द "आदर" र दोस्रो भाग को सारा को ऐतिहासिक विकास प्रक्रियामा गुमाए। र यो आज पूर्ण पहिचान गर्न नसकिने "बितेका अतिथि"। तर हाम्रो पाठकहरु को लागि छैन। तिनीहरूले अब मूल्य phraseologism बुझ्न थियो "एक ब्रश संग तपाईं राम्रो दिन।"
अझै पनि, कि बोली एक आंकडा व्यक्त?
बुझ्न गर्ने छैन र गर्ने ऐतिहासिक भ्रमण दिन छैन गर्नेहरूका लागि सामान्यतया परिचित व्यक्ति सम्बोधन, साँच्चै अनौठो बताउँछन् शब्दहरू आधुनिक कान संयोजन एक विनोदी अभिवादन मतलब गर्न। यसलाई कसैले आफूलाई पराई संग स्वतन्त्रता अनुमति हुनेछ असम्भाव्य छ।
कसरी मांग मा वाक्पद्घति?
बोलीको एक आंकडा, "एक ब्रश संग तपाईं राम्रो दिन" (अलिकति माथि अर्थ phraseologism छलफल भएको थियो) त्यसैले गाढा जस्तो छैन जब पनि, आधुनिक मानिस अभिवादन बढि साधारण फारम रुचि। र यो किनभने मानिसहरू आफैलाई नमस्कार भन्न छैन छ। अन्य व्यक्ति playfulness वा के बयान बुझाउँछ को टोन बुझ्न गर्दैन भने, इसारा को सौन्दर्य हराएको छ। यहाँ सबैले आफूलाई लागि प्रश्न एक विशेष कथन को औचित्य निर्णय गर्छ।
तर सम्झना: वाक्यांश "एक ब्रश संग तपाईं राम्रो दिन" - जो ग्रहण गर्न सकिन्छ एउटा अनौपचारिक अभिवादन मात्र यदि मित्र वा मित्र ठेगाना - एक मानिस, एक असल मित्र। अन्य अवस्थामा, तपाईंले अप्ठ्यारो स्थितिमा प्राप्त गर्न सक्छन्। सामान्य मा, भाषा - एक नाजुक कुरा। यसलाई पावर को ब्यालेन्स हदसम्म सन्दर्भ र भाषा अवस्था मा निर्भर गर्दछ।
कि Thomism छ? परिभाषा र अर्थ
"सिपल color Katun" - को पहाडी Altai मा बाँकी
खाता प्राप्य कारोबार
प्लट, अभिनेता र भूमिकाको। "मास्को आँसु विश्वास होइन" - फिल्म पुरस्कार "ओस्कार" जित्यो
लिलियन बेटान्ट्रार्ट: फ्रान्सको सबैभन्दा अमीर महिलाको जीवनी
रोमन Fokin - filmmaker सिंड्रोम kaveenschikov
मानवीय प्रविधिहरू आधारमा पुरानो मान्छे संग सामाजिक काम: शैक्षिक पक्ष
Solikamsk विफलता: घटनाहरूको क्रमिक बिवरण। घटनाको को कारण र भविष्यमा लागि पूर्वानुमान
सोफिया Tolstaya: तस्बिर र जीवनी
देश योजना विवरण: फ्रान्स। फ्रान्स: देशको इतिहास। संस्कृति को फ्रान्स स्मारक